खबरदार जल्लादहरु ! विवेक गुमाउन पाईदैन ! – erupse.com
खबरदार जल्लादहरु ! विवेक गुमाउन पाईदैन !
प्रारम्भ मै ध्यान आकृष्ट गर्छू कि जल्लाद भनेर यहां साहै्र क्रुर तथा निर्दयी व्यक्तिहरुलाई भनिएको हो । र तिनिहरुलाई खबरदार ! हाम्रो प्रथम शर्त मानवता हो । जुनसुकै विधि पद्धति र प्रतिस्पर्धा नै किन नहोस्, त्यो मानवता अन्र्तगत पर्नुपर्छ । मानसिक रुपमा स्वस्थ मान्छेहरुले विवेक गुमाउन पाईदैन । अहिले सत्तामा कम्युनिष्टहरु छन् । जनताले उनैलाई स्यावासी दिएकाछन् र जयजयकार गरेका छन् । त्यसैले, ईष्याले जलिन्छ होला । रिस र क्रोधले पागल भईन्छ होला । कृपया, तैपनि विवेक गुमाउन पाईंदैन र नगुमाउनोस । रिसको बेला वेद पढ्दैन त स्वांठहरुले मात्रै भन्छन् र मान्छन् । विवेकीहरु त वेदलाई रिस र क्रोधको बेला पढ्नैपर्ने ग्रन्थको रुपमा लिन्छन् र पढ्छन । अनि आफुलाई अत्याधिक क्रोधित हुंदापनि के गर्न हुने र के गर्न नुहने भनि सम्हाल्छन् । तसर्थ, आफुमा निहित विवेकको सदर गर्ने हो भने मानवता कायम गर र विवेक नगुमाउ ।
प्रसंग कोरोना भाईरस अर्थात कोभिड–१९ को हो । अहिले विश्वमा कोरोना महामारीले रोगव्याधी वा कुनैपनि प्रकोप सवैको निम्ति समान हुन्छ भन्ने खास सिकायत दिलाएको छ । सबथोक हो भनेर बुझेको र बुझाईएको दुनियांको कुनैपनि महिमा फगत सावित भएको छ । अहिले केवल एउटै सवाल सर्वाधिक चासोमा छ, त्यो हो मानव जीवन र मानवताको मुल्य । तर एकथरी सिरक भित्रैबाट राजनैतिक दाउपेच रच्दैछ । जहां शुन्य मानवता छ । जनताको पहरेदारी नै ऊ एक्लै हो जस्तो गरेर कुर्लिरहेको छ र पोख्खिरहेको छ । नितान्तै सत्य नै यहि हो कि भन्ने लाग्ने गरि झुठ स्थापित गर्न तल्लिन छ । अझ यस्तो लाग्छ उ नै भयंकर निडर हो र देश र जनताको खास शुभेच्छुक । अनि सरकार, सरकारमा भएका मन्त्री प्रधानमन्त्री र नेकपाका सम्पुर्ण नेता कार्यकर्ता चैं पुरै बुद्धि विवेकहिन दुई खुट्टे जन्तु मात्रै ।
खेल मैदान मासेर खेल हुन्छ ? हुन्छ भने त्यहां विध्वंस हुन्छ र सबैथोक जायज मानिन्छन् । खबरदबार जल्लादहरु ! यसर्थमा हामी अधिनायकवादको विल्ला भिर्न तयार छौं तर खेल मैदानलाई आगो लगाएर खेल्न थालिएको खेलको पुरै मुकाविला गर्छौं । ताकि त्यो हामीलाई स्विकार्य छैन । बडो विनम्रताको साथ हामी अुनरोध गर्छौं कि हाम्रो राजनितिक प्रतिस्पर्धा र दलिय आदर्शगत स्वार्थको लडाई गर्दै गरौंला । अहिले तन, मन र धनले कोरोनाको विरुद्ध लागौं । विश्व मानचित्रमा नेपालीहरुको मानविय सर्वश्रेष्ठता पेश गरौं । कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई बचाउन सकियो भने यो सरकार सफल हुन्छ । यस्को पुरै श्रेय नेकपाको नेता कार्यकर्ताले लिन्छन् र हामी अर्को चुनावमा पनि बरालिन्छौं र अहिलेजस्तै घिटिघिटिमा पर्छौं भनेर नपिरोलिनोस । सम्हालिएर बस्नोस । विवेक नगुमाउनोस । भोलि न रह्यो बांस न रह्रयो मुरली गरेर के काम ? बांस रहेपछि मुरली बनाउदै गरौंला र बजाउंदै गरौंला ।
छिमेकी देश चिन र अरु थुपै्र देशहरुमा कोरोना बुलेट रेलको गतिमा प्रसारित हुंदैगर्दा सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो र पथ्र्यो । रोगको उपचारको लागि विश्व बजारमा उपलब्ध आवश्क उपचार सामग्री र नियन्त्रणको लागि आवश्यक गर्न सकिने र पर्ने सचेतना तथा पुर्वसावधानीहरु अपानउनपथ्र्यो । जस्तो कि किट्स, पिपिई, पञ्जा, मास्क, क्लोरिन लगायतको उपचार सामाग्रीहरुको न्युनतम जोहो गरि तिनै तहको सरकारलाई वितरण गर्ने, यो रोग यदि नेपालमा देखापरि हालेमा के कसो गर्ने भनेर सम्वन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पुर्ण उत्प्रेरणा र अभिमुखिकरण सहित विविध तालिम र गोष्ठिहरु गर्ने, जनतालाई यो रोगबाट बच्न गर्नपर्ने सावधानीका उपायहरुको प्रत्यक्ष परोक्ष सुचना तथा जानकारी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र देशको सम्पुर्ण सिमा क्षेत्र तथा अन्तराष्ट्रिय उडानको उचित व्यवस्थापन लगायतको चिजमा सरकारहरु चुकेको छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । चैत्र भन्दा अगाडि नै खासगरि वुहानबाट विद्यार्थीहरु ल्याउने समय देखी नै अन्तराष्ट्रिय उडान रोकेर वा यात्रुहरुको क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गर्न सकेको भए अहिले देखिराखेको संक्रमितहरु पनि रोक्किन्थे । तीन महिना पहिला आव्हान गरिएको भनिएको टेण्डर प्रक्रिया अन्य टेण्डर जस्तो सामान्य थिएन । यो अलि बढि चासो र महत्वको थियो । त्यस्को पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले गरी राखेको जस्तो नियमित पत्रकार सम्मेलन एवं सुचना प्रवाहको विधिलाई के कसो भईराखेको छ भनेर अद्यावधिक गरिराख्नु पथ्र्यो । जस्ले तीन घण्टा भित्र अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने र छुट्टै तरिकाले सामान ल्याउन पर्ने कुराको सार्वजनिक पुष्टि हुन्थ्यो ।
तथापी, सरकारले असाध्यै सुविचारीपुर्ण तरिकाले सराहनिय निर्णयहरु गर्दै आएको छ । देशव्यापी रुपमा आप्mनो संरचनाहरुको परिचालन गरेको छ । सातैवटा प्रदेशमा सम्पुर्ण आवश्यक सामाग्री सहित स्वाब टेस्टको प्रयोशाला निर्माण गरिएको छ । तल तल स्थानि सरकार र टोलटोल सम्म क्वान्रेटिनहरु निर्माण गर्न लगाईएको छ । यहि चैत्र १ गतेभन्दा पछि विदेशबाट आएकाहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न लगाईएको छ । चिनको वुहान सहरमा रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित स्वदेश फिर्ता ल्याईएको छ । अहिले भारतबाट स्वदेश आउंदै गरेको नेपालीहरुको पनि हदैसम्मको व्यवस्थापन गरिरहेकैछ । राष्ट्रपतिले अमेरिका र अष्ट्रेलियमा भएका नेपालीहरुको अवस्थाबारे बुभ्mनुभएको छ । यो लकडाउनका कारणले मारमा परेका गरिब, विपन्न तथा मजदुरहरुलाई एक द्धार प्रणालीमार्पmत राहत सहयोग वितरण गरिएको छ । घर बहालमा बस्नेहरुलाई राहतको लागि भनेर सम्वधित घरधनिहरुलाई घरभाडा मिनाहा भनेर आग्रह गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मध्यनजर गर्दै असार मसान्तसम्म हर्जना छुट र चैत्र महिना भित्रै तिरे व्याजमा १० प्रतिशत छुट लगायतको अनेके सहुलियतहरु प्रदान गरिएकोछ ।
अहिले कोरोनाको विश्वव्यापी अवस्थाको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारलाई दुत्कार्नुपर्ने कुनैपनि कारण नै देखिदैन । केहि चिज र समयमा थोरै ढिला भएको छ । यस्को अर्थ पुरै गलत भयो भने जसरी अनावश्यक र्युमर (हल्ला) सृजना गर्नेहरुलाई खबरदार । ढमिलो पानिमा माछा मार्न पाईदैन । सरकारले अलि अलिबाबा नाम गरेका चिनियां व्यापारीहरु संग गरेको सामान खरिद प्रक्रिया र मुल्यमा हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन । काम गर्ने क्रममा गल्ति हुन्छन् । भएका होलान । त्यसलाई हामी उचित समयमा (महामारी सामान्य भएपछि) छलफल गर्नेछौं । गलत भएको रहेछ भने गलत गर्नेहरुले कदापी उन्मुक्ती पाउने छैनन् । यो यहि पार्टी हो जस्ले आरोपको भरमा मात्र बहालवाला सभामुख र सुचना तथा सञ्चार मन्त्रिलाई निशर्त कार्वाही ग¥यो । १०÷१२ वर्ष पहिले ईट्टा भट्टामा जिउंदो मान्छेलाई मरेको कुखुरा पोले जसरी पोल्ने नरपिचासहरुको मृद्यालाई ब्युंताउने र जेलमा कोच्ने पनि यहि सरकार हो । यो देश महासंकटमा फसेकोबेला कसैले अपराध गरेको रहेछ पनि तिनिहरुपनि बच्दैनन् र बच्नहुंदैन । तर हिजो राज्य संयन्त्रको दुररुपयोग गर्दै त्यति कृतघ्न र अमानविय कर्म गर्ने र सोको नाड्डो बचावत गर्ने तत्वहरु सम्मिलित केहि थान जत्था र कर्पोरेट मिडियाहरुले गरेको अफवहा हामीलाई मान्य छैन । हामी र हाम्रो सरकारले गरेको राम्रो कामको छेउटुप्पा नदेख्ने र खाल्लि नचाहिने धन्दा मात्रै मच्चाउने हुर्मतहाराहरु संग उचित समयमा बदला लिन्छौं । सिंगो नेकपा नै गलत छ भन्ने अर्थ आउने गरि गरिएको षडयन्त्रपुर्ण प्रपञ्चको आवश्यक परे हामी ठाडै प्रतिकार पनि गर्छौ । सिगों मानव जाति दुखमा परेको बेला राजनैतिक दाउपेच रच्ने र हाम्रो राजनैतिक आस्था माथि धावा बोलिएको कुरालाई हामीले नितान्तै गहिरो तरिकाले लिएका छौं । त्यसैले, खबरदार जल्लादहरु ! विवेक गुमाउन पाईदैन ।
आइतवार, चैत्र २३, २०७६ मा प्रकाशित
काँग्रेसका ८ सांसदले दर्ता गराए संविधान संशोधन प्रस्ताव
मानवअधिकार समितिले प्रहरीमा छुट्टै दलित सेल खडा गर्न सरकारलाई निर्देशन
स्वदेश फिर्तीका लागी साउदी अरब नेपाली दूतावासको अत्यन्त जरुरी सुचना
भारतबाट आएकी महिलाको क्वारेन्टिनमा मृत्यु
डडेल्धुरा, २१ जेठ– डडेल्धुरामा क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । भारतबाट आएर जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१..
दाइजोको फर्निचर बनाउन सामुदायिक वनको काठ प्रतिबन्ध
सामाजिक सञ्जालप्रतिको विश्वास जम्मा १.१५ प्रतिशत !
यी हुन भारतबाट आउन तोकिएका पशुपतिनगरदेखि दार्चुलासम्मका २० नाका
विभेदको शिकार म किन ?
आर्थिक संकट टार्न साधारण खर्च कटौति गर्न सरकारलाई चन्द्रमणी सापकोटाको ११ सुझाव
Purna Bk Pahadi
भारतबाट आएकी महिलाको क्वारेन्टिनमा मृत्यु June 3, 2020
दाइजोको फर्निचर बनाउन सामुदायिक वनको काठ प्रतिबन्ध June 3, 2020
अभिनेत्री चन्दनाद्वारा आत्महत्या, प्रेमी फरार June 3, 2020
जातीय विभेदविरुद्ध सबैले आवाज उठाऔं’:नायिका वर्षा सिवाकोटी June 2, 2020
काँग्रेसका ८ सांसदले दर्ता गराए संविधान संशोधन प्रस्ताव June 2, 2020
सामाजिक सञ्जालप्रतिको विश्वास जम्मा १.१५ प्रतिशत ! June 2, 2020
यी हुन भारतबाट आउन तोकिएका पशुपतिनगरदेखि दार्चुलासम्मका २० नाका June 2, 2020
मानवअधिकार समितिले प्रहरीमा छुट्टै दलित सेल खडा गर्न सरकारलाई निर्देशन June 2, 2020
स्वदेश फिर्तीका लागी साउदी अरब नेपाली दूतावासको अत्यन्त जरुरी सुचना June 2, 2020
लकडाउनमा पनि घूस… June 2, 2020
अब सेना परिचालन June 2, 2020
फेरि आयो अर्को चक्रवात ! June 2, 2020
होटलमा जुवा खेलिरहेका आधा दर्जन बढी ठूला व्यापारी पक्राउ June 2, 2020
विदेशी लगानीमा सञ्चालित १६ कम्पनीले लगे १० अर्ब लाभांश June 2, 2020
गण्डकी प्रदेशमा थप १० जनामा कोरोना June 2, 2020